भोलि जेठ महिनाको अन्तिम शुक्रवार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
जेठ ३०, २०७६ GA
भोलि बिक्रम संवत २०७६ साल जेठ महिनाको ३१ गते शुक्रवार तद अनुसार सन् २०१९ जुन १४ तारिख , तपाईको दिन कस्तो रहला कसरी बित्ला हेर्नुहोस आजको राशिफल !
सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। कुटुम्ब तथा दाम्पत्यजीवनमा सुख सन्तोषको अनुभूति हुनेछ। प्रियजनसंगको भेटघाटले मनमा उत्साहको मात्रा बढेर जानेछ। बौद्धिक चर्चामा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायको लागि समय लाभदायक रहेको छ।
शारीरिक र मानसिक स्वस्थताको कारणले निर्धारित समयमा आँटेका कार्यहरु सम्पन्न भएर जानेछ। अस्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ। शुभ समाचार सुन्ने मौका मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको प्रसस्त सहयोग मिल्नेछ। अधुरा रहेका कार्यहरु पुरा भएर जानेछ।
नया कार्य थालनी गर्नका लागि शुभ समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। अनावश्यक बादविवादमा फस्ने सम्भावना रहेको छ। मानहानी हुनबाट बच्नु पर्नेछ। शारीरिक अस्वस्थताको कारणमानसिक उत्साहमा कमि आउने छ। बिद्यार्थी वर्गका लागि पढाई लेखाईको क्षेत्र सामान्य रहेको छ।
कर्कट (हि,हु,हे,हो,डा,डि ,डु,डे,डो)
मनमा खिन्नता जाग्ने छ। छातीमा समया देखिन सक्छ सावधान रहनुहोला। अनिन्द्रले सताउने छ। सार्वजनिक स्थानमा स्वाभिमान भंग हुने सम्भावना रहेकाला सावधान रहनु होला। खराचाको मात्रामा बढेर जानेछ। पानी देखि बच्नु पर्नेछ। समग्रमा कर्कट राशी हुनेहरुका लागि भोलि को दिन मध्यम रहेको छ।
शारीरिक स्फूर्ति बढ्नाका साथै मनमा उत्साह बढेर जानेछ। साथी भाई एवम परिवारका साथमा आनन्दमय समय व्यतित हुनेछ। आर्थिक लाभको सम्भावना रहेको छ। भाग्योदयको प्रबल योग रहेको छ। नया कार्यको थालनी गर्ने सु अवसर मिल्नेछ। मनोरन्जनात्मक कार्यमा रुचि बढ्ने छ।
परिवारमा सुख शान्तिको वातावरण सिर्जना भएर जानेछ। बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। सुखद यात्राको सम्भावना रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। अनावश्यक झैँ झमेलामा सकेसम्म नाफस्दा नै राम्रो हुनेछ।
सिर्जनात्मक कार्यमा रुचि बढ्ने छ। बैचारिक दृढताका कारण कार्यमा सफलता मिल्नेछ। बस्त्राभुषण तथा मनोरन्जनात्मक कार्यमा धन खर्च हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ। प्रियजनको भेटघाटले मनमा उत्साह बढेर जानेछ। दाम्पत्यजीवनमा खुसियाली छाउने छ।
भोलि को दिन मनोरन्जनात्मक कार्यको पछाडी धन खर्च भएर जानेछ। मानसिक चिन्ता तथा शारीरिक अस्वस्थताले सताउने छ। बाणी तथा व्यवहारमा संयमितता अपनाउनु पर्नेछ। परिवार तथा इष्टमित्रका साथमा झैँ झमेला हुने सम्भावना रहेको छ।
परिवारमा सुख शान्तिको वातावरण सिर्जना भएर जानेछ। प्रियपत्रको भेटघाटले मन आनन्दित हुनेछ। प्रेम सम्बन्ध मजबुत भएर जानेछ। आयआर्जनको क्षेत्रमा वृद्धि भएर जानेछ। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको साथ र सहयोग प्रसस्त मिल्नेछ। लामो तथा छोटो दुरीको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ।
व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नाम दाम र प्रतिष्ठा कमाउने समय रहेको छ। लामो तथा छोटो दुरीको यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ। नोकरीमा पदोन्नति हुने योग रहेको छ। सरकारी कार्यको क्षेत्रमा लाभ हुने देखिन्छ। पारिवारिक जीवन सुखमय बित्नेछ। सन्तान सुख मिल्नेछ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिए पनि मानसिक रुपमा स्वस्थ रहनुहुनेछ। सन्तान सुख मिल्ने छैन। मोज मस्ती र घुमफिरका पछि धन खर्च भएर जानेछ। नोकरी व्यवसायको क्षेत्रमा सोचे अनुरुपको सफलता पाइने छैन। शुभ समाचार सुन्ने अवसर मिल्नेछ। प्रतिष्पर्धात्मक कार्यमा सकेसम्म सहभागी नहुदा नै राम्रो हुनेछ।
कार्यमा अपेक्षाकृत सफलता पाउनका लागि कडा मेहनत गर्नु पर्ने देखिन्छ।स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्नेछ। पैतृक सम्पतिमा लाभ हुनेछ। अनितिक कार्य गर्नबाट जोगिनु पर्नेछ। आकस्मिक धनलाभ भएर जानेछ। बिद्यार्थी वर्गका लागि पढाई लेखाईमा भएर जाने सम्भावना रहेको छ। धार्मिक एवम आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा मिन राशी भएकाहरुका लागि भोलि को दिन शुभ फलदायी रहेको छ।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ३०, २०७६१३:००
भोलि जेठ महिनाको अन्तिम दिन, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !